Ina Cigaal Xaqdarro miyaanay ahayn inuu Somaliland hogaamiyo?
SomaliNet Forum (Archive): RA'YIGA DADWEYNAHA - Your Opinion: Somalia: Archive (Before Nov. 8, 2000): Ina Cigaal Xaqdarro miyaanay ahayn inuu Somaliland hogaamiyo?
<!-Post: 119644-!><!-Time: 973040465-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>Suldan Diiiriya<!-/Name-!> Tuesday, October 31, 2000 - 03:01 pm
<!-Text-!> Sow kii afweyne marna xidhi jiray marna soo deyn jiray maaha. india tag ambassadoor ka noqo, gal xadhig, no! madax ka noqo xafiiska yar ee chamber of commerce; ok sir! waar kaasu waa naag..
maalintii waqooyi go'ay shirkii djibouti ayuu ka ahaa Co-chairman. hadana habar awal baa u yeedhay wax isugu xidhxidhay: wuxuu ku dambeyay madaweyne somaliland. Alla ayaan daraanaa Isaaq. Ma kaasay raali ka yihiin oo dusha ka saaran. waalahay(ra'yigayga )hadduu c/qaasim odhan lahaa waxaa tahay Priminister wuu ku soo boodi lahaa. intaa waxa raaca waxa la yidhahdaa yagi allahoode sir badan baa laga hayaa. Waar xaarka aan iska dul qaadno. <!-/Text-!>
<!-/Post: 119644-!> <!-Post: 119707-!><!-Time: 973047247-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>ismaciil<!-/Name-!> Tuesday, October 31, 2000 - 04:54 pm
<!-Text-!> SULDAAN hurta run baad sheegtay lakin waxa meesha taala issaq maa kula fahmaya intaa aad taqaanid ?????
hadaba SULDAAN isaaq maanta ayu oogu leeta oo habr awal aya hogaamisa garxajisna kaa tala bax somaliland oo waa kuwa wax garadkoode somalida kale wax laqabsanayo inacigaal iyo inta kale ee reer shiekh isaaqna haa oo macaanato oo vodka ha wada cabaan kolaay ina cigaal waa caba. <!-/Text-!>
<!-/Post: 119707-!> <!-Post: 121079-!><!-Time: 973195530-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>Anonymous<!-/Name-!> Thursday, November 02, 2000 - 10:05 am
<!-Text-!> habar jeclona nadayee yaa u ciidmin cigaal wayo shaqadisiiba waxay noqoday marba reer soodhawee oo reer gale oo lajoogay ari walee isaaq ragmaha <!-/Text-!>
<!-/Post: 121079-!> <!-End-!>